Yakachipa tsika sheet sheet simbi yekutsika zvikamu fekitori uye vatengesi | Ouzhan
Sheet simbi zvikamu zvinosanganisira stamping zvikamu. Sheet simbi zvikamu zvigadzirwa zvinogadziriswa ne sheet sheet technology. Hatigone kuita tisina machira esimbi kwese kwese muhupenyu hwedu. Sheet simbi zvikamu zviri kuburikidza nefilament simba ichitenderera, laser kucheka, inorema kugadzira, simbi kubatana, uye simbi kudhirowa. Iyo inogadzirwa nekudhirowa, kucheka kweplasma, kunyatsoita simbi, roll kugadzira, simbi simbi kukotama, kufa kugadzira, kufaira kwejeti yemvura, uye kunyatsogadzirisa.
Yetsika jira simbi yekutsika-zvikamu-chaiyo ndarira sheet simbi stamping yekugadzirisa michina zvikamu
Tsananguro mune imwe nyanzvi nyanzvi yekune dzimwe nyika inogona kutsanangura mashiti esimbi se: jira simbi inzira inotonhorera yekushanda kwemashiti esimbi (kazhinji pazasi pe6mm), kusanganisira kuveura, kubaya / kucheka / kuomesa, kupeta, kumwaya, riveting, uye kupemba, Kuumba ( dzakadai semutumbi wemota), nezvimwe. Chinhu chayo chinozivikanwa ihwo hukobvu hweyunifomu yechikamu chimwe chete ichocho. Sheet simbi zvigadzirwa zvine hunhu hwehuremu huremu, simba rakakwira, magetsi conduction, yakaderera mutengo, uye yakanaka kuwanda kugadzirwa kuita. Ivo vane akasiyana siyana ekushandisa. Sheet simbi kugadzira kwave kushandiswa zvakanyanya muminda yemagetsi, kutaurirana, mota indasitiri, uye zvekurapa zvekushandisa. Semuenzaniso, mumakesi kesi, nharembozha, uye MP3, sheet sheet chikamu chakakosha. Uye zvakare, inoshandiswa mukugadzira michina yezvokurapa, uye inoshandiswa zvakare mumotokari nemotokari (matori) miviri, ndege fuselages nemapapiro, matafura ekurapa, kuvaka matenga (kuvaka) uye zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa.
Zvakanakira zveShanghai Ouzhan sheet simbi yekutsika otomatiki zvikamu
Yakasarudzika yendarira jira simbi stamping muchina zvikamu
Maitiro makuru Sheet simbi yekutsika kugadzira
Pashure: Sheet simbi zvikamu kutsika
Zvadaro: Sheet simbi zvikamu zvemoto